Aalborg — ihu igwe site na ọnwa, mmiri okpomọkụ
World Resorts N'ókèala Denmark Aalborg
The nkezi kacha kwa ụbọchị okpomọkụ — 20.7°C July. Nkezi kacha n'abalị okpomọkụ — 14.4°C August. The nkezi kacha nta kwa ụbọchị okpomọkụ — 2.9°C na January. The nkezi kacha nta n'abalị okpomọkụ — 0.7°C February.
Nkezi kacha okpomọkụ nke mmiri — 19.2°C ofu August. The nkezi kacha nta okpomọkụ nke mmiri — 0.7°C ofu February.
Oke ọdịda — 81.2 mm E dere ya August. Kacha nta ọdịda — 34.6 mm E dere ya April.
Okwu nke Jiri Nzuzo Ndi ana-akpo 2020 Meteodb.com. Weather on ntụrụndụ maka ọnwa, mmiri okpomọkụ, ego nke ọdịda. Chọpụta ebe izu ike na ebe ugbu a oge. Page load 0.0275 s. ▲